မြစ်ဆုံအထိ လမ်းလျှောက်သူတွေ ကြို့ပင်ကောက်မြို့ကို ရောက်ရှိ
Photo Courtesy of Soe Win Nyein
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံစီမံကိန်း လုံးဝဖျက်သိမ်းဖို့အတွက် ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ၂၃ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ကနေ မိုင်ပေါင်း ၁၆၀၀ လမ်းလျှောက် တောင်းဆိုကြ တဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများ အင်အားစုအဖွဲ့ဟာ ဒီနေ့ညနေမှာ ပဲခူးတိုင်း အနောက်ခြမ်း ကြို့ပင်ကောက်မြို့ကို ရောက်ရှိ လာပါတယ်။
မူလရန်ကုန်မြို့က စထွက်ခွာစဉ်က လမ်းလျှောက်သူ ၁၀၀ နီးပါး ရှိခဲ့ပြီး လမ်းခရီးတစ်လျှောက်က ဒေသ ခံတွေ ပူးပေါင်းလိုက်ပါလာကြတဲ့အတွက် လူအင်အား ၂၀၀ နီးပါး ရှိနေပြီလို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများ အင်အားစု တာဝန်ခံ ကိုရဲထွဋ်ခေါင်က ပြောပါတယ်။
"တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပူးပေါင်းလာကြတာ လူအင်အား ၂ဝဝ ကျော်လာပါပြီ၊ ဒီနေ့ညတော့ ကြို့ပင်ကောက်မှာ၊ မြို့သူမြို့သားတွေကိုတော့ ဒီဧရာဝတီမြစ်ကြီးပေါ်မှာ ဒီစီမံကိန်းကြီး ဆောက်လုပ်မယ်ဆိုရင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဘာဖြစ်ပေါ်လာမလဲ ဆိုတာကတော့ ပြောပြဖို့ ရှိတယ်"
အဲဒီအဖွဲ့ဟာ ရန်ကုန်ကနေ ကချင်ပြည်နယ် ဧရာဝတီမြစ်ဆုံနားက တန်ဖဲကျေးရွာအထိ လမ်းလျှောက်ကြ မှာဖြစ်ပြီး ရက်ပေါင်း ၁၂၀ လောက်ကြာမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ခရီးစဉ်တလျှောက် သူတို့နားတဲ့ မြို့တိုင်းနီးပါးလောက်မှာ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဟောပြောပွဲတွေ ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဧရာမ ရေကာတာကြီးတွေ ဆောက်လုပ်တိုင်း အကျိုးရှိနိုင်မလား
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း အပြီးတိုင် ဖျက်သိမ်းပေးဖို့ တောင်းဆို
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း အပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းဖို့ မြစ်ကြီးနားမှာ ဆွေးနွေး
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းစာချုပ် ပြည်သူတွေကို ချပြဖို့ တောင်းဆို
This trouble was created by crazy Than Shwe... I wonder how Than Shwe became that much idiot.
Mar 30, 2014 04:37 AM